5 Best Cities hitsidika-pisaorana In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Cities hitsidika-pisaorana In Eoropa
Thanksgiving foana ny tena fety nentim-paharazana mihodinkodina manodidina ny fianakaviana, vorontsiloza, sy ny baolina kitra. Na izany aza, ireo eo aminareo izay mankafy dia lavitra ary afaka mampiasa fialantsasatra haingana dia tokony handinika ny fandaniam-potoana fialantsasatra amin'ity taona ity amin'ny iray amin'ireo tanàna tsara indrindra hitsidihana ny Thanksgiving any Eropa.
Ny ela kaontinanta manana ny tsara indrindra tanàna Hitsidika-pisaorana. Na dia kaontinanta iray manontolo Eoropa Mahavariana, voafantina ihany tanàna roa tena mahafinaritra hitsidika-pisaorana.
Eoropa matetika feno olona loatra amin'ny mpizaha tany, fa iray ihany Tsy afaka milaza toy izany koa ny faramparan'ny Novambra. Izany no mahatonga ity ampahany amin'ny taona ity fotoana mety hitsidihana tanàna taloha ary havaozy ny fomban-drazan'ny Thanksgiving miaraka amin'ny sakafo be sy loko mahavariana.
Na ianao Amerikana na Eoropeanina, izao manaraka izao ny lisitry ny tanàna dia tokony ho toerana ambony eo amin'ny sy ny manodidina Thanksgiving.
Hanombohana ny dianay amin'ireo tanàn-dehibe tsara indrindra hitsidika ny Thanksgiving nosafidianay – efa nampiasaina, Belzika
Mba nataony fohy, Bruges dia tena mahagaga tanàna avy mahitsy hatramin'ny antitra sasany Fairytale. mazava ho, tanàna taloha no toerana ny hatsaran-tarehy rehetra, ny lainga. Tonga mivantana avy amin'ny vanim-potoana Medieval, ary eto ianao hahita be dia be ny fahiny sy ny mesmerizing trano.
Ianao dia afaka maka mitaingina sambo ny alalan 'ny tanàna ny mampino lakandrano sy mandinika amin'ny gaga rehetra ny ravina rakotra trano. Inona koa, satria izany Novambra, mijery ny zava-drehetra fanampiny dreamlike noho ny rehetra latsaka ny tsara tarehy loko.
Tsy afaka mandeha mitsidika diso amin'ny Bruges ho fisaorana tao Eoropa. Azonao atao mihitsy aza mitsambikina amin'ny fiaran-dalamby ho any ity tanàna ity mba hahatonga ny traikefa rehetra mampino fanampiny! and we are sure as soon as you complete your holiday, dia hizara izany 5 Best tanàna An'i Eoropa ny fisaorana tao am-bilaogy lahatsoratra.
Rotterdam ho Bruges Lamasinina
Utrecht an'i Bruges Lamasinina
The Hague an'i Bruges Lamasinina
Norway dia lavitra ao amin'ny mangatsiaka avaratra, Oslo no Soa ihany fa tao an- atsimo faritra ao amin'ny firenena. Ny tanàna dia toy izany toerana tonga lafatra ho an'ireo izay tia ny hatsiaka, nefa mbola tsy afaka mandray ny mampangovitra sery ny Norvezy.
Oslo no tena mahatalanjona ao 'ity faritry ny taona noho ny rehetra fahalavoana mahagaga toerana manodidina. Plus, mahazo mahita ny Northern Lights izay tsara indrindra hita ao amin'ity firenena ity, dia inona koa no mety ny olona iray mila?
Mety tsy hahita ny nentim-paharazana Fisaorana karazana sakafo ianao taloha, fa ny traikefa azonao mba manana mihoatra noho ny mendrika izany. Na dia ny sakafo dia tsy ho samy hafa araka izay tiako atao, ny Norwegians mbola manana be dia be ny sakafo mahafinaritra mba hanolotra. Ohatra, rehefa dia nentim-paharazana norvejiana hotdog. Na izany aza, Izany dia midika hoe masaka amin'ny hen'omby tahiry sy voahodidina lamban- lefse, ny flatbread vita amin'ny lafarinina, ovy, sy ronono.
Avy manaitra bahoaka mimanda zaridaina sy ny antitra ny Viking tranombakoka, ianao manana betsaka ny azo atao ao Oslo. Izahay antoka fa ianao te-handany fotoana bebe kokoa noho ny andro vitsivitsy monja ao amin'ity tanàna mahafinaritra.
Oslo is our most north pick for 5 Best tanàna Tsidiho ny Thanksgiving ao Eoropa.
London, fanjakana Mitambatra
Tsy afaka mety dinganina London. Ny olon-drehetra no efa nandre izany, ary izay rehetra tia azy. Inona no tsara kokoa aza, ianao miaraka raiki-pitia azy eo amin'ny fahalavoana. Ny tanàna goavana, fa ho any an-offseason tonga lafatra fotoana hamangiana ny sasany amin'ireo matetika toerana be olona.
Be dia be ny zava-nitranga mitranga amin'izao fotoana izao ny taona, ka raha misy asa ianao mpankafy, ianao tia London. Fanampin'izany, ny parks amin'ny fararano dia manoatra noho ny mahatalanjona. Kensington Gardens, Greenwich Park, ary Windsor Great Park ny sasany amin'ireo toetra maro lanitra ianao maniry ny hitsidika.
Ireo aminareo izay mihevitra ny sakafo ho anisan'ny manan-danja Thanksgiving, hanana ny anjaranao ara-drariny any London. Ny sakafo sehatra eto Mahavariana Ary raha maro karazana toy ny iray indray tao an-tanàn-dehibe ao amin'ny fanjakana. Samy hahazo izay ilainy ny rehetra ny tsirony.
Ny tsara indrindra mikasika ny nankany Londres dia hoe maro ireo tsipika malaza fiaran-dalamby izay mandeha amin'ny kontinanta Eoropa ho any London, toy ny olona avy amin'ny Amsterdam, Paris, ary Berlin, rehetra izay manolotra mahafinaritra Nitsidika toerana mana-traikefa any ambanivohitra ary nandeha namaky ny Eurotunnel ambanin'ny anglisy Channel na ny Frantsay miantso azy - La Manche.
Ianao tokoa fantatrao momba ny Soisa, sy ireo tendrombohitra mahagaga azy, nefa tena mety tsy nandre ny momba Lugano. Tena tsara tarehy tanàna any atsimon'i Soisa, akaikin'ny sisin-tanin'i Italia.
Ny tanàna eo amoron'ny iray mesmerizingly manga farihy eo amin'ny farany ambany ny Alpes, izay toa efa ho mahagaga. Izany zava-misy irery dia tokony ho ampy mba anao mandany ny fisaorana tao am-tsara any Eoropa, Lugano is our most unique pick in Best Cities to Visit for Thanksgiving.
koa, nankany sy tamin'ity tanàna ity amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby dia manaitra traikefa amin'ny fotoany avy izy. Izany angamba no fomba tsara indrindra mba hankafy ny hatsaran-tarehin'ny iray amin'ireo faritra manaitra indrindra ny Eoropa. Fanampin'izany, ianao tia ilay dia noho ny mahafinaritra fiarandalamby ny tenany, toy ny Soisa no iray amin'ireo fiarandalamby kalitao indrindra any Eoropa.
Basel ho Lugano Lamasinina
Bern ny Lugano Lamasinina
Lucerne ny Lugano Lamasinina
Zurich any Lugano Lamasinina
Tsy afaka manam-bola angamba tamin'ny firesahana ireo tanàna jiro mandrakizay. Paris foana iray amin'ireo tanàna nitsidika indrindra eto an-tany noho ny antony. Na izany aza, Izany dia midika hoe feno olona koa matetika fomba izay no mahatonga faramparan'ny Novambra no tonga lafatra fotoana hamangiana. Plus, dia tsy mampaninona ny spellbinding latsaka loko.
Inona koa, Paris in Novambra dia paradisa ho an'ny Instagramers. Tsy ho afaka naka sary intsony raha mbola eto ianao. Farafaharatsiny, izay azo antoka fa mahazo ny diany izay hahatsiaro mandrakizay ianao.
Ary ny amin'ny sakafo, tsara, ianao mahalala ny any Frantsa; ary afa-, Paris no gastronomic renivohitry ny izao tontolo izao. Recreating ny Thanksgiving àry dia tena mora, ary ianao no mety ho hanampy ny hipoaka ny fahatezeranao izany. Tsy ho afaka hanao izany toeran-kafa. ihany Paris dia afaka manolotra ny sakafo sy ny hizaha izay astonish na dia ny pickiest lalana.
Ny hany zavatra afaka tsara kokoa ny traikefa nahafinaritra dia ny misambotra ny fiaran-dalamby ka handeha hitety ny frantsay ambanivohitra. Ho traikefa tsara indrindra!
Mandany ny fisaorana tao am-tsara indrindra amin'ny tsara indrindra ho an'ny tanàn-dehibe ny fisaorana tao am-An'i Eoropa
Afaka handeha sy hiresaka momba ireo tanàna ireo. Fanampin'izany, afaka hitantara aminareo ny momba -toeran-kafa fa koa mendrika ny fiahian'ny manodidina Thanksgiving. Bavarian manontolo faritra Alemaina, ny Avaratr'i Italia amin'ny Milan indrindra, Scotland, ary ny maro hafa. Thanksgiving tany Eoropa dia mety ho traikefa tsy hay hadinoina na inona na inona ireo toerana.
Na aiza na aiza no manapa-kevitra ny handeha amin'ny farany, tokony handinika Nandeha lamasinina. Toy ny fotoana maro dia hoy izahay:, ny sasany amin'ireo toerana ireo dia tsy hanome anao traikefa tena marina raha tsy mitsidika azy ireo amin'ny lalamby ianao. Izany ihany no ho afaka hiaina ny majika Eoropa tena. Mifandraisa Save A Train to get your tickets as soon as possible because Thanksgiving is almost here!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving Train Travel fiaran-dalamby nankany travelbelgium travelfrance travelnorway travelswitzerland